Disney naNickelodeon mavara anomhara paApple Arcade | Nhau dzepaphone
Nyamavhuvhu apfuura, iyo Apple Arcade mutambo wekunyorera chikuva, yakapfuura mitambo mazana maviri iripo. Mazhinji emazita asvika papuratifomu iyi haasi chimwe chinhu kunze kweshanduro dzemazita anowanikwa muApp Store uko kutenga kwakabviswa kuti zvikwanise kuvapa pachikuva ichi, zvichikanganisa chikamu chekushanda kwemutambo.
Chishanu chinotevera, nhamba yemazita anowanikwa muApple Arcade ichawedzera mazita matsva, kunyanya maviri: Disney Melee Mania y Nickeloden Yakanyanya Tennis. Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezve aya maviri mazita, ini ndinokukoka iwe kuti uenderere mberi nekuverenga.
2 Nickelodeon Yakanyanya Tennis
Disney Melee Mania mutambo Arena type umo zvikwata zvevanhu vatatu zvinorwa mumitambo yemaminetsi mashanu. Pakati pemavara atinogona kusarudza ndiMickey Mouse, Buzz Lightyear, Elsa ...
Iri zita richavepo kune iPhone, iPad, Mac uye Apple TV.
Mutambo wavepo yakagadzirwa neMighty Bear Games studio uye, maererano nemukuru wayo mukuru, Simon Davis:
Isu tinofara kushanda neDisney kuunza aya anodiwa mavara kuDisney uye Pstrong yekutanga yenhandare yenhandare yemutambo, inowanikwa chete paApple Arcade.
Mafani achakwikwidza neakare-style Disney uye Pstrong makwikwi mukupokana kunonakidza uye kupengereka kuti vapukunyuke munyonganyonga uye vagare vakajeka.
Nickelodeon Yakanyanya Tennis
Mumwe mutambo unouya munguva pfupi kuApple Arcade ndiNickelodeon Extreme Tennis, ine mifananidzo yeNickelodeon mavara akafanana. Spongebob, Angelica, Rocko, Garfield nevamwe.
Zita iri rinotipa maitiro evatambi vakawanda inopinza vatambi kune mumwe nemumwe vachipesana neNickelodeon themed mamiriro kunge Bikini Pazasi. Inosanganisirawo imwe chete mutambi nyaya modhi apo vatambi vanopihwa basa rekufambira mberi kuburikidza nematambudziko akasiyana kune yega yega.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Disney naNickelodeon mavara anogara paApple Arcade
Podcast 13x15: Aya ndiwo maitiro akaitwa Apple 2021
Otterbox MagSafe Nyaya uye Dock ye iPhone: Nyaradzo, Dziviriro uye Hunhu